Sidee loo ogaadaa qofka iga soo wacaya taleefankayga gacanta iyadoo aan la ogaan | Golaha Moobaylka
Sidee loo ogaadaa cidda iga soo wacaysa taleefankayga gacanta
El SPAM iyo nooc kasta oo wicitaano taleefan ah waxay ku noqoneysaa cabsi dhab ah dhammaan isticmaaleyaasha. Sidaa darteed, markii aan aragno wicitaanno naga baaqsaday, weli waa ikhtiyaar wanaagsan in la hubiyo cidda naga soo wacday mobiilka ka hor inta aynaan waqtigeenna ama lacagteenna ku lumin. Waxaan ku baraynaa inaad ogaato cidda taleefankaaga kuugu soo wacda websaydhyada iyo codsiyada ugu fiican suuqa, nala soo hel.
1 Ayaa iigu yeeraya taleefanka gacanta: ka eeg bogaggan
1.1 Liiska spam
2 Ayaa igu soo wacaya mobilada: codsiyada adiga ku caawin doona
3 Ka fogow SPAM adoo adeegsanaya Liiska Robinson
Ayaa iigu yeeraya taleefanka gacanta: ka eeg bogaggan
Waxaan ku bilaabaynaa marka hore xulashada degellada waxay noo oggolaan doonaan inaan ku hubino cidda naga soo wacaysa moobaylka nooc kasta oo qalab ah, yacni, uma baahnno inaanu wax rakibno gabi ahaanba, raadin wanaagsan ayaa kugu filnaan doonta, ka dooranaysa dhammaan bogagga shabakadda ee aan haysanno midka adiga kugu habboon. Waxaan haynaa liis bogag wanaagsan oo aad ka raadin karto, ee ha moogaanin.
Liiska spam Waa nooc ka mid ah mashiinnada raadinta ee adoo galaya lambarka taleefanka ee na soo wacay, wuxuu si dhakhso leh u tusi doonaa haddii aan ku suganahay SPAM ama taleefanka xayeysiinta. Waxaan ku jirnaa kiiskan kahor intaanay u muuqan inay yihiin galka raadinta liisaska SPAM ee suuqa qaranka, Si kale haddii loo dhigo, waxay si gaar ah ugu habboon tahay haddii waxa aad rabto ay tahay inaad sameyso baaris adigoo tixraacaya lambar Isbaanish ah. Sidaa darteed, tani waa ikhtiyaarka ugu horreeya ee aan kugula talin doono haddii waxa aad rabto ay tahay in la ogaado cidda wacaya taleefankaaga gacanta oo sidaas uga fogow dhammaan noocyada xayeysiinta aan loo baahnayn.
Diiwaan kale laakiin websaydhkan bulshada lafteeda ayaa si joogto ah u cusbooneysiineysa liistada si loo helo natiijooyin wanaagsan. Waxay u adeegtaa 50 dal oo kala duwan, sidaas Asxaabta waxay isu muujin kartaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee aan maanta halkan kuugu soo bandhigeyno. Waxay leedahay beel ka badan toddoba milyan oo isticmaale bishii, taas oo la sheego dhowaan, sidaa darteed way fududahay ka mid noqoshada bulshadeeda. Waxay leedahay aag xubin ah oo lagu abuuro liisaskaaga madow oo aad wax ka beddesho qiimeynta, tani waxay si cad u baahan doontaa inaad ahaato isticmaale diiwaangashan, taas oo aan u muuqan karin mid xiiso leh sida doorashadii hore, halkaas ayay ku xirnaan doontaa dookhaaga.
Sida loogu waco lambar qarsoon Orange, Vodafone iyo Movistar
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah in Jaalayaasha ay leeyihiin barnaamijyo loogu talagalay Android iyo iPhone markaa waxaad awood u yeelan doontaa inaad naftaada ku dhisto nidaamka oo aad xitaa ku dhex darto aaladahaaga, xiiso leh.
TelefoonkaSpam waa degel kale oo isticmaaleyaashu kaa caawin karaan, adigu taleefanka waad ku dari kartaa adigana liiska ayaa lagu dari doonaa. Waa waxa loo yaqaan 'tusaha taleefanka gadaal ee naga caawiya inaan raadino lambarrada aan la aqoon ee na soo wacaya oo markaa awood u leh inaan aqoonsano si aan u ogaanno cidda ay ku mahadsan yihiin macluumaadka ay bixiyeen adeegsadayaashu.
Websaydhkani waa mid fudud oo laga yaabee inuu yahay mid ka mid ah faa'iidooyinkiisa, maaddaama ay si fudud u leedahay nooc ka mid ah Raadinta ugu sareysa taasi si toos ah uma toosin doonto baaritaanka inta badan la qabtay halkaasna waxaa laga yaabaa inaan ka helno kuwaas oo ah lambarrada hadda sida ugu badan u shaqeynaya "Wicitaanada taleefanka SPAM" ama xayeysiinta aan loo baahnayn.
Ayaa igu soo wacaya mobilada: codsiyada adiga ku caawin doona
Sidee ayey noqon kartaa haddii kale, hadda moobilku waa qayb aad muhiim u ah maalinteenna maanta, waxaan kahadleynaa codsiyada loo heli karo taleefannada gacanta kuwaas oo naga caawin doona inaan nidaamka gebi ahaanba la jaanqaadno, shaki la'aan tani waxay u taagan tahay faa'iido maxaa yeelay qaar ka mid ah xitaa waxay noo oggolaadaan inaan helno taariikhda wicitaannada la helay, gaar ahaan haddii aan ka hadlayno aaladaha Android, kuwaas oo ah kuwa u oggolaanaya xorriyadda ugu badan dhinacyadaas.
Shaki la'aan, isku-darka mid ka mid ah barnaamijyadan aaladdayada ayaa naga badbaadin doonta dhibaatada aan caadiga ahayn ee wicitaannada taleefanka.
Waxaan ku bilaabaynaa codsigan la jaan qaadi kara labadaba iPhone sida la socota Android, taas oo ah faa'iido muhiim ah. Waxay leedahay diiwaanka wicitaanka iyo aqoonsiga, waxay si otomaatig ah noogu soo sheegi doontaa inta wicitaan ee aan helnay ay yihiin SPAM oo xitaa waxaan ku dari karnaa lambaradaas "liiska madow" oo naga badbaadin doona dhibaatada ah inaan ka jawaabno wicitaanada.
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa codsi kale, kan dambe ayaa si gaar ah loogu talagalay oo sidaas darteed waxaan ku rakibi karnaa aaladahayaga Android. Waxay leedahay aqoonsi soo waca oo ogaada SPAM oo waliba xannibayaa hadduu u arko inay lama huraan tahay (DOWNLOAD). Waxaan ka heli karnaa codsiyo badan oo dheeraad ah dukaamada caadiga ah ujeedkan, si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxaan kugula talinayaa inaad ku kalsoonaato horumariyeyaasha shandadaha qaar gadaal ka wata, si looga fogaado dhibaatooyinka arimaha gaarka ah ama xitaa aan u helno SPAM badan.
Ka fogow SPAM adoo adeegsanaya Liiska Robinson
Si kastaba ha noqotee, sida ugu fiican ee dhammaan tallaabooyinka looga hortegayo ogaanshaha cidda taleefanka gacanta naga soo wacaya waa inaan ku darno nafteena Liiska 'Robinson List', habka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo cidda iyo sida loo helo macluumaadka xiriirkeena. Kiiskeyga, waxaa la iiga diiwaangeliyay Liiska 'Robinson List' tan iyo markii ay si rasmi ah u bilaabatay. iyo munaasabadda aan ku helo nooc kasta oo wicitaan SPAM ama xiriir ah waa mid aad u yar.
Liiska 'Robinson List' waa adeeg bilaash ah oo loogu talagalay muwaadiniinta isla markaana aad u fudud in la isticmaalo, waa inaad soo gasho Halkan oo samee koonto si aad ugu biirto liiska. Markay hubiyaan macluumaadka aad siisay, waxaad bilaabeysaa inaad kasoo muuqato liis la ilaaliyo oo loogu talagalay shirkadahaan mas'uulka ka ah gudbinta joogtada ah ee xayeysiinta, Tusaale ahaan, waxaad joojineysaa wicitaanada shirkadaha taleefannada ee kuu fidiya dalabyadooda cajiibka ah ee aadan rabin.
Buuxinta foomku waxay noqon doontaa mid aad u fudud, sidaa darteed aad ayaa loogu talinayaa. Kaliya shirkadahaas aad si cad u oggolaatay ayaa kuu soo diri kara xayeysiin, ka faa'iideysi ahaan waa inaad ogaataa inaad kala noqon karto oggolaanshaha markasta oo aad rabto adigoo la xiriiraya. Isbaanishka waa qasab in shirkadaha soo dira xayeysiinta ama ku soo waca taleefanka ay la tashadaan Liiska 'Robinson List', sidaa darteed waa inaadan ka maqnaan fursaddan na la siiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Sidee loo ogaadaa cidda iga soo wacaysa taleefankayga gacanta
Waa maxay iyo sida loo arko faylka MKV ee kombiyuutarkaaga
Sida loo ilaaliyo Excel oo leh lambarka sirta ah